BBC Somali - Warar - Xaalada Somalia oo laga deyrinaayo
Xaalada Somalia oo laga deyrinaayo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 5 Luulyo, 2012, 05:39 GMT 08:39 SGA
Barakacayaasha ku sugan gudaha Somalia ayaa laga deyrinayaa xaaladooda
Hay’adda badbaadinta dhallaanka ee Save the Children ayaa sheegtey in gobollada dhexe iyo koonfureed ee Somalia ay soo food-saartey xaalad xun iyadoo aanay dadku helin roobab ku filan.
Hay’adda ayaa ka digtey in in dagaallada iyo roob la’anta ay sii xumeynayaan xaaladda dadka ka soo kabanaayey macluushii ba’neyd ee sanad ka hor ku dhufatey Somalia.
Save the Children wxay leedahay waxa la filayaa in uu daaho dalaga laga filayo beeraha taasi oo ay sabab u tahey roob yarida.
Hay’ada ayaa sheegeysa in ilaa 1.4 milyan oo barakacayaal ah ay qarka u saaranyihiin in ay soo food-saarto cunno yari, iyadoo la filayo in beeca raashiinka uu circa isku shareero.
Hay’adda ayaa ku baaqeysa kaalmo dhaqaale oo deg-deg ah si wax looga qabto dhibaatadaasi.
Waxaa haatan sanad laga soo wareegey xilligii macluusha ba’aneyd ay ku dhufatey Somalia, xerada qaxootiga Dhadhab ee ku dhow xadka Kenya iyo Somalia, ayaa waxaa weli ku nool dad kor u dhaafaya nus malyuun ruux oo Somali u badan.